Interview | Indigenous Knowledge
(The Subaltern Studies group was founded in India in 1982 by Ranjit Guha, an Indian historian and Economist)
म आन्दोलनरत वामपन्थी खेमामा थिएँ र सक्रिय कार्यकर्ता पनि थिएँ। जुन खेमामा भएपनि साम्राज्यवादविरोधी भएको नाताले हामी सबै राष्ट्रवादी थियौं। “स्वराज” को लडाइँको त्यस चरणमा बढ्दो असन्तोषको तीब्रताको बेला हामी सुन्दर भविष्यको कल्पनामा उत्साहित थियौं। हाम्रा लागि स्वाधीनता कसैले परिभाषित गरे जस्तो थिएन; यो त कम वा वेसी सुनौलो भविष्यको साझा अभिप्राय थियो, तर हामीले चाहे जस्तो भविष्यको आगमन भएन। त्यसले नै फेरि निराशा ल्यायो तर त्यो निराशा नयाँ पुस्ताको भन्दा भिन्‍न थियो। मैले ‘एन एन्थोलोजी अफ सवअर्ल्ट्रन स्टडिज: अ रिडर’ को परिचयमा कसरी पुराना पुस्ताको निराशा नयाँ पुस्ताको भन्दा भिन्‍न छ? भनेर केही हदसम्म बताउने प्रयास गरेको छु। नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधि सहिद अमिन, ज्ञान पाण्डे र अन्य जसले मसँग काम गरे आदिलाई के आशा गर्ने? भन्‍ने पनि थाहा थिएन तर उनीहरूले पनि धेरै आशा गरेका थिए, त्यसैले नयाँ पुस्ता निराश थियो। निराशाको सर्वव्यापी परिस्थितिको त्यही संरचनाले नै मेरो बीचारलाई आकार दियो। (more…)
Education, History, Interview, Kolkata, Memory, Philosophy, Politics, Ranjit Guha, Research, Subaltern studies